Ukuvela kwamaLogos | Martech Zone
ISonto, Ephreli 21, 2013 ISonto, Ephreli 21, 2013 Douglas Karr
Abantu abaku Inkampani yeLogo cela Ngabe i-logo kufanele ingaphelelwa yisikhathi? Cha. Amalogo awawona nje umdwebo ongalibaleki noma ukubonwa kohlobo olumele lona, ​​kodwa futhi ancike kakhulu kulokho abonwa kukho nobuchwepheshe bokuzibuka. Uphawu lwezimoto luyaphrintwa, kuwebhu, nasemotweni… ngakho-ke kumele yakhelwe ukuze bobabili bamele uhlobo lomkhiqizo futhi babukeke ngendlela ehambisanayo kuwo wonke ama-mediums… kanye ne-grill yemoto yakho.
Eminyakeni eyedlule, ukwakheka kwelogo kwakuhlanganisa ukuthi ilogo ibizobukeka kanjani kokumnyama nokumhlophe noma kumshini wefeksi… lawa akuzona izangoma esikhathazeke ngazo kulezi zinsuku. Izitayela zelogo ukuvuthwa ngokuhamba kwesikhathi futhi, futhi kungabalulekile ukumane uqhubeke ubukeke njengomkhiqizo omusha. Ngokuzayo, ngiyaqiniseka ukuthi ama-logo amathathu, ubukhulu, noma amalogo anyakazayo azogqama kakhulu njengoba amadivayisi wethu ewasekela. Kukhona amathani we izinsiza logo ngaphandle lapho ukuhambisana nokuthi ama-logo aqhubeka kanjani.
Sisanda kuvuselela ilogo yethu ku- DK New Media, kusuka:
Leyo nguqulo ibiyinhlanganisela ye-D ne-K esithombeni obekufanele sikhombise iso elibheke esikhathini esizayo. Akekho owathola lokho, noma kunjalo, futhi amahlaya amaphiko kaBatman alandela. Umdwebi wethu wezithombe, uNathan, wazibophezela futhi wakha uphawu olusimele kahle. Sithatha imizila ehlukile, yangokwezifiso ukushayela imiphumela yamakhasimende ethu phezulu. I-logo entsha:
Nazi ezinye izinguquko zama-logo athandwayo kusuka ku- Inkampani yeLogo:
Tags: logo ye-apulalogo ye-bmwlogo ye-canonlogo ye-ibmlogo ye-kodaklogologo ye-mercedeslogo ye-mercedes-benz-Microsoft logoilogo yewindows microsoftuphawu lwe-pepsiilogo yegobolondoilogo ye-volkswagenlogo ye-vwiwindows logouphawu lwe-xerox
Impendulo Yakho Yezinkinga Zomphakathi Yezindaba Ilimaza Umsebenzi Wakho
Imininingwane engu-5 Yemininingwane Yezenhlalo Ingadalula Ibhizinisi Lakho
Ngo-Apr 22, i-2013 ku-10: 09 AM
Ngithanda izimpiko zikaBatman! Kepha ngithanda i-Star Wars X-Wing Fighters futhi. Ingabe izinhlangano ezinjalo ziyinto engeyinhle ngempela? Mhlawumbe, mhlawumbe cha. Ngicabanga ukuthi ama-gradients angangeza ukunotha ku-logo, kepha entsha yakho incike kwi-gradient ukuxhumana nomumo. Lokho kuzokufaka enkingeni ngosayizi abancane, futhi uma / lapho udinga inguqulo emnyama nomhlophe.
Futhi ngenkathi ngivumelana nomoya wale ndatshana maqondana nokuvela kophawu lomkhiqizo, ngicabanga ukuthi kuyahlekisa ukuthi ufake iPepsi. Abanye bangaphikisa ukuthi ukuvela kwalowo mkhiqizo kuye kwashukunyiswa ukwesaba - ukubamba ulayini wokuphila. Ngicabanga ukuthi iqiniso lokuthi bakushintshe kaningi kakhulu ukuveza imizwa yokungazethembi nokuzithemba. Ngenkathi imbangi yabo eyinhloko uCoca-Cola incike kumkhiqizo wayo eminyakeni edlule. Ukushintshela kumkhiqizo oyisisekelo bekucashile ngokumangazayo, futhi isiko le-pop selikuthathe njengocezu lwaseMelika.
Iphuzu lami ukuthi, ngenkathi i-logo kungafanele iphelelwe yisikhathi, kufanele uphokophele leyo. Ungahlala ushintsha imiyalezo ezungezile, kepha abantu bayaduduzeka futhi bathembele kumikhiqizo ezethembayo, futhi baklolodele lezo ezingekho. Ingabe ulwa kanjani nokugxeka abathengi? Yiba yiqiniso.
Ngo-Apr 23, i-2013 ku-4: 57 AM
Ama-logo we-YMCA awasho neze ukuvela kwemvelo - yize engakudinga. Amane nje amalogo ama-YMCA noma izakhiwo ezahlukahlukene futhi kuze kufike lapho ngikwazi khona ukuthi konke kusasebenza.